अक्सिजन नपाएर पोखरामा सुत्केरीसहित ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु - साँचो खबर Online Khabar
अक्सिजन नपाएर पोखरामा सुत्केरीसहित ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
१२७ पटक पढिएको
२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार (३ हफ्ता अघि)
जेठ १४, काठमाडौं । हाइफ्लोमा अक्सिजन दिएर उपचार भइराखेका बेला डाक्टरले अक्सिजन सकिएको खबर गरेपछि तनहुँ भानुकी सुत्केरी महिलाको परिवार होसहवास उड्यो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड आइसोलेसनमा शुक्रबार भर्ना भएर हाइफ्लो अक्सिजन दिएर सुत्केरीको उपचार भइरहेको थियो ।
बिहीबार साँझ नै अस्पतालले अक्सिजन रेगुलर नभएको भन्दै घरि अक्सिजन दिने, घरि नदिने गरिएको सुत्केरीका आफन्तले बताए । ‘हाइफ्लोमा अक्सिजन रेगुलर छैन भन्यो । आउँछ आउँछ भन्छ, आउँदैन । अक्सिजन नपाएको १ घन्टा हुन लागिसकेको थियो, हामी आफैं अक्सिजन उद्योगमा पुग्यौं,’ सुत्केरी महिलाकी भाञ्जाले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अक्सिजन उद्योगमा पुगेर रोइकराइ गर्यौं । हामी किन्छौं, केही अक्सिजन उपलब्ध गराइदिनुस् भन्यौं तर पाएनौं । फर्किंदा माइजूको मृत्यु भइसकेको रहेछ ।’
अक्सिजनको अभावले माइजूलाई गुमाएको उनले सुनाए । ‘अस्पतालले अक्स्जिन आउँदै छ भन्यो, उद्योगले सबैलाई दिएका छौं भनेर दिएनछ,’ सुत्केरीका श्रीमानले भक्कानिँदै भने, ‘आउँछ आउँछ भनेको अक्सिजन बिरामीको ज्यान गएको १ घन्टा भइसक्दा पनि आइपुगेको थिएन । बेलैमा अक्सिजन पाए उनी बाँच्थिन होला ।’
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पतालमा बिहीबार मध्यरातदेखि बिहान ४ बजेसम्म अक्सिजनकै अभावले सुत्केरी महिलासहित ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अस्पतालमा एक्कासी अक्सिजनको अभाव भएको र हाइफ्लो दिएर उपचार भइरहेका बिरामीले सोही अनुसार अक्सिजन नपाउँदा मृत्यु भएको हो ।
पोखरा स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कोभिड–१९ को उपचार गर्ने गण्डकी प्रदेशकै ठूलो संघीय अस्पताल हो । यही अस्पतालमा एक्कासी अक्सिजनको अभाव हुँदा रातभर दौडादौड चल्यो तर पनि ६ जनाले ज्यान गुमाए ।
तनहुँका ३ जना, म्याग्दी, पर्वत १ र स्याङ्जाका १ जनाको ज्यान गएको हो । अक्सिजन उद्योगले पयर्णप्त अक्सिजन सिलिन्डर पठाएको बताउँछ तर सरकारी अस्पतालमै अक्सिजनको अभावले बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो । हाइफ्लो अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाएका संक्रमितका आफन्तले बेलैमा सचेत गराइदिएको भए आफैं जसरी पनि जोहो गर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रा आफन्त बचाउँन जहाँबाट जसरी पनि अक्सिजनको व्यवस्था गथ्र्यौ तर बेलैमा जानकारी भएन,’ बिरामीका आफन्तले भने, ‘डाक्टर, अर्सहरु त दौडेकोदौड्यै थिए, अक्स्जिनै सकिएपछि उनीहरुको पो के लाग्यो र ? यो अस्पताल प्रशासनका कारण हामीले आफन्त गुमायौं ।’
कोभिड अस्पतालका फोकल पर्सन डा. शरद बरालले हाइफ्लो अक्सिजन नपाउँदा सुत्केरीको ज्यान गएको देखिएको र बाँकीमा अन्य दीर्घ रोगले बढी च्यापेको देखिएको बताए । अस्पतालमा हाइफ्लोका बिरामी बढ्दा एक्कासी अक्सिजनको समस्या देखिएको डा. बरालको भनाइ छ ।
‘हाइफ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामी एक्कासी बढे । यस्ता बिरामीमा अक्सिजनको फ्लो कम हुनेबित्तिकै ज्यान जान जाखिम हुन्छ,’ डा. बरालले भने, ‘मिहिनेत गर्दा गर्दै पनि पनि बचाउन सकिएन । यता सकिन लाग्दा ३ वटा सिलिन्डर भए पनि बोकेर ल्याउनु परेको छ । दौडधुप चलिरह्यो तर हाम्रोमात्र केही लागेन ।’
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन । अस्पतालमा पूर्व उपकुलपति, डिन र डाक्टरहरुकै लगानीमा अक्ब्सिजन उद्योग भएकाले प्लान्ट नभएको त्यहीँका चिकित्सकहरु बताउँछन् । अहिले तिनै डाक्टरहरुको लगानी भएको पोखरा अक्सिजन उद्योगबाट प्रतिष्ठानमा अक्सिजन आपूर्ति हुँदै आएको छ । तर, पर्याप्त अक्सिजन नपाउँदा बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
सहज अक्सिजन आपूर्ति नभएकै कारण समस्या भएको डा. बरालले बताए । हाइफ्लोका बिरामीलाई धेरै अक्सिजन चाहिने र दिइरहेकोभन्दा अलिकति पनि कम हुनेबित्तिकै ज्यानको जोखिम हुने बराल बताउँछन् ।
‘हाइफ्लोका बिरामीलाई प्रतिमिनेट ६० देखि ८० लिटरसम्म अक्सिजन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता बिरामी बढे र समयमा आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको हो,’ डा. बरालले भने, ‘अन्य लोफ्लोमा अक्सिजन दिएर हुने बिरामीलाई प्रतिमिनेट १४ लिटर भए पुग्छ ।’
ठूलो सिलिन्डर ६ हजार लिटर हुनुपर्ने भए पनि ५ हजार लिटरको हाराहारीमा अक्सिजन हुन्छ र त्यसमा पनि केही प्रतिष्ठानका लिकेज हुने डाक्टर बराल बताउँछन् । ‘हाइफ्लोका एउटा बिरामीलाई एउटा सिलिन्डरले १ घन्टा पनि धान्दैन,’ डा. बरालले भने । अहिले अस्पतालमा हाइफ्लोका ९ जना बिरामी छन् ।
पोखराको स्वास्थ्य विज्ञानमा मात्र होइन, पोखराको अन्य अस्पतालमा पनि एक्कासी अक्सिजनको अभाव भएको चिकित्सकहरुले बताइरेका छन् । पोखरामा दैनिक १३ देखि १४ सय सिलिन्डरसम्म दैनिक उत्पादन हुने बताइएको छ । तर, त्यो सिलिन्डर कहाँ र कसरी जान्छ र किन अभाव भइरहेको छ भन्ने आश्चर्य लागिरहेको अस्पतालहरुले बताइरहेका छन् ।
यो समचार सामाजिक सन्जाल बाट साभार गरिएको हो।